Marka Federaalka iyo gobolladu heshiin-waayaan | The Warsan The Warsan
Marka Federaalka iyo gobolladu heshiin-waayaan
by warsan January 31, 2020 January 31, 2020 0625
Howsha dastuuriga ah ee aqalka sare, waxay aheyd inuu xal u hesho mushkiladaha ka dhex aloosma dowladda dhexe ee kuwa gobollada inta xaalku faraha ka bixin.
Marka si aan gabasho laheyn dowlad-goboleedyadu uga horyimaadeen ta dhexe arrimo badan oo aan si leysula arkin awgeed, ayaa waxa arrinka sii cakiray maxkamad sare oo weli aan dhismin oo gaarsiiyey xaaladda meel ayba fara ka bax joogto.
Xaaladdan cakiran oo iska horimaaadka aan leysula gabban taagan, saameynta ugu horreysa waxay ku dhaceysa ruuxdii wadaagga ee Federaalka oo burbur iyo sii kala fogaasho arrinka u riixi kara. Xaalku waxa uu hadda marayaa in dowlad-goboleedyada qaarkood u sii siqayaan inayan waxbaba ku darsan dowladda dhexe, iyo in aaney hirgelin amarrada xukuumadda sare.
Khilaafka Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda dhexe halka uu gaaray waa mid qofka caadiga ahi og yahay oo meel aan midnnimada u wanaagsaneyn maraya. Puntland dhowaanahay waxay diidaneyd inay u hoggaansanto shuruucda waxbarashada oo waa tan iyada iyo wasaaradda federaalka u qaabilsan waxbarashada xaalkoodu marayo ” yeel ama tag”. Dadka qaar baa qaba in Puntland isu heysato inay kaba sarreeyso dowladda dhexe una sii siqeyso inay is-maamul aan Muqdisho wax la wadaagin, waa haddii ay mari kadho.
Dalalka xaaladani qabsadaan oo Hindiya ay ka mid tahay, waxa u dhisan hey’ado dastuuri ah oo loo irkado marka xaaladahani oo kale oogmaan, nasiibdarro dalkani, hey’adahaa weli male, marka waa ciyaal waalidkii ka maqan yahay dagaal dhex maray xalkiisu sida uu mugdi ugu jiro. Waxa ugu yaraan la dhisi karay gole u dhaxeeya laba awoodood oo loo noqdo marka xaalku sidan u raja-beelo. Senetarradu maxay qabanayaan ayaa meesha iman kadha, laakin sida aan ognahay, waxay la kala safan yihiin kuwa is-haya. Ma heli karayaan awooddii labada ay ku dhexgeli lahaayeen. Taladu, waxay tahay in dhinacyadu isu-tanaasulaan, cid walibana wax ka tagto, gaar ahaan ta dhexe, waa inay duqa magaalada naqato, musaalaxana xalka ku dejiso. Cawgu waa xafladeynaya, shacabka talada loo hayaana oo ilmadu gob’a leeday.
Gunmen killed six French aid workers in giraffe reserve in Niger
Russia asking China for military, economic aid for Ukraine invasion
warsan March 14, 2022 March 14, 2022